Efsaneleşme Nasıl Yazılır Ne Demek Sözlük Anlamı Nedir - Nasıl Yazılır. İnfo
Ungayibhala njani iNqaku
Upelo oluchanekileyo oluyimbali
Ubuntu buye bazama iindlela ezininzi zonxibelelwano ukusuka kwixesha elidlulileyo ukuza kuthi ga ngoku. Namhlanje, nangona sinokunika ulwazi omnye komnye ngezixhobo ezinje ngomnxeba, umabonwakude kunye noonomathotholo, ukubhala, esona sixhobo sidala sonxibelelwano sobuntu, kusexesheni kwaye kubonakala ngathi kuyaqhubeka ukugcinwa.Imbali iqale ngokubhala kunye nokubhala iya kuba yinxalenye yobomi bethu kude kube sekupheleni kwehlabathi.
Umthombo unendima ebalulekileyo kunye noxanduva lokuhambisa umyalezo kumfundi ngokuchanekileyo ngenqaku. Ke ngoko, umntu ohambisa umyalezo kufuneka aqale athobele imigaqo ethile yopelo, ngakumbi xa ebhala ingxelo yeprojekthi. Eyona mpazamo ibalulekileyo eyenziwa ngabafundi ngelixa bebhala kukuba abahoyi kakhulu amanqaku eziphumlisi. Nangona kunjalo, isoftware yekhompyuter isetyenzisiwe (umzekelo, iprosesa yamagama) ijonga upelo kwaye yenze izilumkiso kumsebenzisi. Ukujonga nje ezi zilumkiso kunokwanela ukuthintela iimpazamo ezininzi.
Kuthetha ntoni ukuGqitywa?
Uyibhala njani iNqaku?